I-New Modern Contemporary Museum (Moco) Museum ivulwa eBarcelona
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Spain Izindaba Ezintsha » I-New Modern Contemporary Museum (Moco) Museum ivulwa eBarcelona
Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Amasiko • Imfundo • Ezokuzijabulisa • Izindaba zaseNetherlands • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • Spain Izindaba Ezintsha • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba
IMoco Museum ithatha indawo kaPalacio Cervelló, phambilini okwakuyindawo yokuhlala yangasese yomndeni ohloniphekile waseCervello kuze kube yi-18th Century.
I-Modern Contemporary (Moco) Museum iphinda imodeli yayo yomnyuziyamu ehlanganisiwe eBarcelona, ​​eSpain.
Ngemuva kwempumelelo yayo e-Amsterdam, uMoco unanela ukuzibophezela kwakhe ekuboniseni imisebenzi yezithonjana zabaculi abadume umhlaba wonke kanye nezinkanyezi ezikhulayo.
IMoco Museum izovula iminyango yayo ngomhlaka 16 Okthoba 2021 ngomhlaka 16th Isigodlo sekhulu leminyaka enkabeni yedolobha.
The IMyuziyamu Yesimanje Yesimanje (iMoco) iphinda imodeli yayo ebandakanya wonke umuntu eBarcelona, ​​eSpain. Ngo-16 Okthoba 2021, iMoco Museum Barcelona ivula iminyango yayo emphakathini, imaka isahluko esisha semnyuziyamu ezimele.
Ubuciko besimanje nobesimanje
Ukulandela impumelelo yayo ku Amsterdam, UMoco unanela ukuzibophezela kwakhe ekuboniseni imisebenzi yezobuciko ngabaculi abadume umhlaba wonke kanye nezinkanyezi ezikhulayo. UMoco Amsterdam iqale yavula iminyango yayo ngo-Ephreli 2016. Namuhla, iMoco Museum yase-Amsterdam yamukele izivakashi ezicishe zibe yizigidi ezimbili ezivela emazweni angaphezu kwe-2 ahlukene. Ezivakashi eziningi, iMoco iyindawo yokungena emhlabeni wobuciko. Siyaziqhenya ukwamukela izethameli ezibanzi ezisivakashele futhi zithandane nobuciko okokuqala ngqa.
UMoco Barcelona unemisebenzi yobuciko evela kuAndy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Banksy, Salvador Dalí, Damien Hirst, Keith Haring, KAWS, Hayden Kays, Yayoi Kusama, David LaChapelle, Takashi Murakami, & More! Ubuciko bokucwilisa obudijithali obuvela ku-teamLab, i-Les Fantômes, ne-Studio Irma.
I-Esplendor de la Noche by UGuillermo Lorca: UMoco wethula umbukiso wokuqala wase-Yuropa ovela kumculi wesimanje waseChilean embukisweni oxuba imilingo neqiniso. Kukhethwe nguSimon de Pury, indali edumile, umthengisi wobuciko kanye nomunye wabantu abahamba phambili emhlabeni wobuciko.
I-TeamLab: Ubuciko Obucwilisayo BeDijithali
Isikhala sokuqala saseYurophu esizinikezele embukisweni we-NFT.
IMoco Museum Barcelona
Kutholakala ku-c / Montcada 25 eBarcelona. IMoco Museum ithatha indawo kaPalacio Cervelló, phambilini okwakuyindawo yokuhlala yangasese yomndeni ohloniphekile waseCervello kuze kube yi-18th Century. Kusukela eNkathini Ephakathi kuya kwengama-20th Ikhulu leminyaka, izikhulu, abathengisi, kanye namakhosi asebukhosini babambelele kule ndawo yomlando. Ngenhlonipho enkulu yesakhiwo esivele sikhona, iStudio Pulsen ibuyise ingqayizivele yePalacio Cervelló - evumelana nezidingo zeMoco Museum ukudala isikhala esikhulu sanamuhla nesesimanjemanje.
Lokhu kuthathwa kwesikhala kukhombisa isinyathelo sokuqala sikaMoco, ngenkathi sithatha indawo yeVilla Alsberg (b. 1904) eAmsterdam - isakhiwo ngokomlando esasigcinelwe abantu abakhethekile. Nakulokhu, iMoco Museum iguqula amandla esikhala esikhethekile ukwamukela bonke. Kodwa-ke, i-Amsterdam isibe yincane kakhulu ukuthi ingavezwa wonke amaphupho ethu amabi kakhulu, futhi nendawo yethu yombukiso inciphile. Kunobuciko obuningi kakhulu esifuna ukukuhlanganyela nezindaba eziningi kakhulu esingazixoxa.